China gbasaa metal waya ntupu factory na suppliers | Ansheng
Ngwunye ígwè gbasaa bụ ihe mpempe akwụkwọ nke e guzobere site na ntanye igwe gbasaa na igwe na-akpacha ajị iji mepụta ntupu.
Ihe: Aluminom efere, ala carbon ígwè efere, igwe anaghị agba nchara efere, nickel efere, ọla kọpa efere, aluminum magnesium alloy efere, wdg
Akpa ákwà na njirimara: A na-eme ya site na ịpị aka na ịgbatị mbadamba ígwè. Igwe ntupu nwere njirimara nke sturdiness, nchara nchara, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide, na ezigbo mmetụta ventilashion.
Ụdị: Dị ka ọdịdị ahụ si dị, ọ nwere ike kewaa ya: mpịakọta, mpempe akwụkwọ, wdg.
Dị ka ihe ahụ si dị, enwere ike kee ya n'ime: ntupu aluminium, igwe anaghị agba nchara, ntupu igwe, galvanized steel mesh, nickel mesh na wdg.
Dị ka ntupu udi, ọ nwere ike kere n'ime: rhombus, square, gburugburu oghere, hexagonal oghere, azu ọnụ ọgụgụ onu, mbe mbe na na. Enwere ike ịkọwapụta nkọwa pụrụ iche.
Ọgwụgwọ: mkpuchi PVC, galvanizing na-ekpo ọkụ, ikpo ọkụ ọkụ, anodizing (aluminom efere), na-agba agba mgbochi nchara, wdg.
Ngwa:A na-emepụta ma na-arụpụta ngwaahịa ọla kọpa agbasapụtara site na teknụzụ kọmputa dị elu, yana usoro oghere dị iche iche na nhazi na-agbanwe agbanwe. Ngwaahịa nwere ike ebipụ, kpudo, edging, elu ọgwụgwọ na ndị ọzọ na miri-larịị nhazi, nke bụ nnọọ vasatail.
1. Enwere ike iji igwe nyocha, ọgwụ, ịkpụcha akwụkwọ, nzacha, nchekwa mba, ụlọ ọrụ, ụlọ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ, ụlọ ọrụ ugbo na akụrụngwa, akụrụngwa, ụlọ ọrụ petrochemical, ngwa ngwa ụlọ, eji maka ụlọ elu, ọnụ ụzọ na windo mgbochi. ohi, nchekwa ụzọ, steepụ Okpokoro, tebụl na oche, vents, okpokolo agba dị iche iche maka iburu ngwongwo, shelf, wdg.
2. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ maka nnukwu ebe a na-ete ụlọ dị ka ụlọ dị elu, ụlọ obibi obodo, ebe obibi, wdg. Ọ bụ ụdị ọla eji arụ ọrụ ọhụụ eji arụ ụlọ ọgbara ọhụụ ma enwere ike iji ya rụọ Mkwado maka akwa akwa.
3. Enwere ike iji ya dị ka okporo ụzọ awara awara, ogige egwuregwu, okporo ụzọ nchekwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ngalaba nyocha ngalaba sayensị na-enyocha saịtị na obere nyocha.
Akọrọ (mm) SWD (mm) LWD (mm) Uhie (mm) Obosara (m) Ogologo (m) Arọ (n'arọ / m2)
0,5 2,5 4.5 0,5 0,5 1 1.8
1 10 25 1.1 0.6 2 Ugboro
1.5 15 40 1.5 1.8 4 Ugboro abụọ
1.5 23 60 Ugboro abụọ 2 3.6 Ugboro abụọ
2 22 60 Ugboro abụọ 2 4 3.69
4.5 50 100 5 2 Ugboro abụọ 11.15
5 50 100 5 1.4 Ugboro abụọ 12.39
6 50 100 6 2 2,5 17.35
Nke gara aga: Nickel Waya ntupu
Osote: Welded waya ntupu